Best GZL240 akọrọ granulator emeputa na ụlọ ọrụ | Keyuan
The igwe adopts abụọ-ogbo ịghasa nri system.horizontal ejima-ịghasa nri na pụrụ iche cantilever imewe, nke mma nso nke nhazi ihe na ihe ịga nke ọma ọnụego na mkpụrụ nke granulation.
A na -ejikarị akọrọ akọrọ na ọgwụ, nri, chemicaland ụlọ ọrụ ndị ọzọ.Ọ dabara adaba maka nsị nke ọgwụ na -emebi ngwa ngwa site na iru mmiri, ọ dị mfe ịmịkọrọ mmiri, na -enwe mmetụta maka ikpo ọkụ, na enwere ike iji irighiri ihe mee ihe iji meziwanye mmiri mmiri, mkpakọ mbadamba, Na -ejuputa capsules na granules maka akpa.Dabere na ọtụtụ uru, a na -eji ya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche.
Ojiji nke ihuenyo mmetụ kristal na teknụzụ njikwa dị iche iche iji melite mgbanwe na nchekwa nke ngwaọrụ ahụ;
A na-ekewa mpaghara a na-ebugharị site na mpaghara na-arụ ọrụ ka ọ dị ọcha ma mechie emeputa site na ntụ ntụ ruo granules.na mmetụta mmepụta na-egbochi uzuzu na mmetọ obe, yana akụkụ kọntaktị niile nwere ihe na-adị mfe ịhazi ma kpochaa;
Nke gara aga: Gzl200 akọrọ granulator
Osote: Gzl260 akọrọ granulator